लन्डनमा किन ह'त्या गरियो नेपाली सेफ बिक्रमलाई ? श्रीमतीलाई फोन गरी पाँच मिनेटमा आउँछु, खाना तताएर राख्न भनेका थिए विक्रमले ! - Prateek Nepal
लन्डनमा किन ह’त्या गरियो नेपाली सेफ बिक्रमलाई ? श्रीमतीलाई फोन गरी पाँच मिनेटमा आउँछु, खाना तताएर राख्न भनेका थिए विक्रमले !
January 13, 2021 January 13, 2021 Ramash kunwar
एजेन्सी । लन्डनमा एक नेपाली सेफको ज्या’न लिएका छन् । लण्डनको इष्टकोटमा बस्दै आएका अन्दाजी ४० वर्षीय विक्रम केसीको गत आइतबार राती ज्या’न गएको हो । कामबाट घर फर्किँदै गरेका केसीलाई स्थानीय इष्टकोट ट्रेन स्टेशन बाहिर एक २१ वर्षीय युवाले कु’ट’पि’ट गर्दा घ’टनास्थलमै मृ’त्यु भएको नेप्लिज सेफ एशोसिएसन यूकेका संस्थापकसमेत रहेका एनआरएनए युरोप उपसंयोजक कृष्ण तिमल्सेनाले जानकारी दिए ।
तिमल्सेनाका अनुसार मृ’तक केसी र मुस्लिम समुदायका ती युवाबीच सामान्य भ’ना’भ’न हुने क्रममा घ’टना भएको बुझिएपनि झ’ग’डा’को यकिन कारण खुलिसकेको छैन । मृ’तकको शरीरमा कुनै देखिने खालका चो’ट’प’ट’क नरहेको तथा घ’टनामा कुनै पनि सामान प्रयोग भएको नपाइएको समेत प्रहरीको भनाई उदृत गर्दै तिमल्सेनाले बताए । घ’टना घ’टाउने युवालाई प्रहरीले घ’टनास्थलबाटै प’क्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
मृ’तकको परिवार निकट तिमल्सेनाले बताए अनुसार आइतबार राती कामबाट फर्किँदै गर्दा घरनजिकै आइपुगेपछि केसीले श्रीमतीलाई फोन गरी खाना तताएर राख्न भनेका थिए । पाँच मिनेटमा आउँछु भनी आधा घण्टासम्म पनि घर नपुगेका उनको फोन समेत नउठेपछि श्रीमती बुझ्न भन्दै घरबाट दुई मिनेट दूरीमा रहेको स्टेशनतर्फ गएकी थिइन् । त्यतिञ्जेल घ’टनास्थलमा प्रहरी र एम्बुलेन्स आइसकेका थिए ।
सोधपुछपछि प्रहरीले उनलाई केसीको ह ‘त्या’ भएको तर किन र कसरी भन्ने अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको भन्ने जानकारी गराएका थिए । काठमाडौं आरुबारी घर भएका केसी कुवेत हुँदै १२ वर्षअघि लन्डन आएका थिए । लन्डनमा उनी श्रीमती र भाइ, बुहारीका साथ बस्दै आएका थिए । केसीका बाबुआमाको बसोबास पहिल्यैदेखि भारतमा रहेकोमा बाबुको नि’धन भइसकेको छ भने आमा अहिले पनि भारतमै छन् ।
युरोप उपसंयोजक तिमल्सेनाले केसीको नि’धनमा ग’हिरो दुःख व्यक्त गर्दै सामाजिक संजालमा फोटो समेत सार्वजनिक गरेका थिए । उनकै पहलमा केसी बेलायत आएका थिए । यसैवीच, नेप्लिज सेफ एसोसिएसन युकेले घ’टनाको भ’त्र्सना गरेको छ । एसोसिएसन युके अध्यक्ष दधि आचार्यले केसीको दोषीलाई क’डा भन्दा क’डा स’जाय पाउनु पर्ने र पी’डितले क्ष’तिपुर्ति दिन संस्थागत रुपमा पहल गर्ने जानकारी दिए। कोरोनाका कारण प्रत्यक्ष भेटघाट हुन नपाए पनि संस्थागत वा व्यक्तिगत सहयोगका लागि पहल भैरहेको आचार्यको भनाई थियो ।
बेलायतमा अस्पतालका श’व गृह भरिएपछि श’व राख्न विकल्पको खोजी
बेलायतमा अस्पतालका श’व गृह भरिएपछि श’व राख्न विकल्पको खोजी बेलायतमा कोरोना भाइरसका कारण धेरै मानिसहरुको मृ’त्यु हुन थालेपछि उनीहरुको श’व राख्नका लागि अस्थायी श’व गृहहरु खोज्न थालिएको छ ।स्थानीय अस्पतालहरुमा उपलब्ध श’व गृहहरुमा स्थान अभाव भएपछि श’व व्यवस्थापनका लागि अस्थायी संरचनाको व्यवस्था गरिएको हो । दक्षिणी लण्डनस्थित सरे काउन्टीमा ६०० वटा श’व राख्न सक्ने क्षमता रहेकोमा स्थानीय अधिकारीहरुले अस्थायी श’व गृहको प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
सरे रिजिलेन्स फोरमका प्रवक्ताले मृ’त्यु भएका बिरामीहरुलाई अस्पतालको शैय्यामा राखिरहनु वा विदेशमा देखिएजस्तो करिडोरमा राख्नुभन्दा पूर्ववत् श’व गृह भरिएकाले अस्थायी शवगृहमा राख्ने गरेको स्वीकार गरे । मृतकका आफन्तले अस्थायी श’वगृहमा सम्पर्क गरी श’व संकलन गर्न सक्ने बताए ।
अहिले लेदरहेडमा रहेको हेडली कोर्टमा १७० वटा शव राखिएको पनि प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन् । सो शव गृहको कुल क्षमता ८४५ वटा शव राख्नसक्ने रहेको छ । ”अप्रिलदेखि जुनसम्मको १२ हप्तामा ७०० वटा श’व राख्नु परेको थियो तर बितेको तीन सातामा मात्र ३३० वटा श’व राख्नुपर्यो” उनले भने ।
उता यस्तै समस्या बेलायतको केन्ट लगायत अन्य स्थानमा पनि निम्तिएको बताइएको छ ।यसअघि पहिलो वेभका बेलामा पनि गत वर्ष लण्डनमा अस्थायी श’व गृहको व्यवस्था गरिएको थियो ।बेलायतमा कोरोना संक्रमण भएको २८ दिनभित्रमा मृ’त्यु हुनेहरुको संख्या ८० हजार नाघिसकेको छ । कोरोनाका कारण धेरै मानिसहरु गु’माउने मुलुकमा बेलायत पाँचौँ मुलुक हो ।
युट्युबद्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको च्यानल नि’लम्बन
किन भयो अदालतमा महान्यायाधिवक्ताको असहमति ?
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा भी’षण आग’लागी, तीनजनाको मृ’त्यु
September 10, 2020 September 10, 2020 Ramash kunwar
कोरो’नाको औषधि हो’डबा’जिमा अमेरिकाले मार्यो बाजि !
August 26, 2020 Ramash kunwar
September 13, 2020 January 11, 2021 Ramash kunwar